ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ် (PCB), printed wiring board(PWB), rigid printed board, High frequency antenna board, Double side board.2layer,2.0မီလီမီတာဘုတ်အ�PCB���ပုံနှိပ်ဝါယာကြိုးဘုတ်အဖွဲ့�PWB���တင်းကျပ်ပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့��high frequency ကိုအင်တင်နာဘုတ်� (နှစ်ချက်ခြမ်းဘုတ်အဖွဲ့ing အလွှာ(PWB), rigid printed board, High frequency antenna board, Double side board.2layer,2.0မီလီမီတာဘုတ်အဖွဲ့ပေးသွင်း,စက်ရုံ -WMD
နေအိမ် » ထုတ်ကုန်များ » အထူးနည်းစနစ် PCB
ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ် (PCB), ပုံနှိပ်ဝါယာကြိုးဘုတ်အဖွဲ့(PWB), တင်းကျပ်ပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့, high frequency ကိုအင်တင်နာဘုတ်, နှစ်ချက်ခြမ်းဘုတ်အဖွဲ့.2အလွှာ,2.0မီလီမီတာဘုတ်အဖွဲ့
အဝတ်အချည်းစည်းဘုတ်အဖွဲ့, ရှင်းလင်းသောဘုတ်အဖွဲ့, high frequency ကိုအင်တင်နာဘုတ်,
တင်းကျပ်နှစ်ခုအလွှာပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့, အလွှာရေတွက်ဖြစ်ပါသည် 2, IPC CLASS 2, မှုန်သောအနက်ရောင် , အဆိုပါဝိသေသစင်ကြယ်သော PTFE သုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ် (PTFE) ပန်းကန် F4BM-2 ထုတ်လုပ်မှု, အဆိုပါပန်းကန်အတော်လေးပျော့ဖြစ်ပါသည်, ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပုံပျက်သောနှင့်အရွယ်အစားချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ကျုံ့ရန်လွယ်ကူသည်; ပလာစမာအပြောင်းအလဲနဲ့သုံးစွဲဖို့လိုအပ်, ရှည်လျား၏အရွယ်အစား, PCB စက်ရုံ၏အပြောင်းအလဲနဲ့စွမ်းရည်အများစုကျော်, မဟုတ်တဲ့ခုခံ welding ဒီဇိုင်း, မျက်နှာပြင်ခြစ်ရန်လွယ်ကူသည်, အသေးစိတျ၏စစ်ဆင်ရေး၏ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုပိုမိုမြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များရှိ, အဆိုပါပန်းကန်ကိုယ်နှိုက်၏ဝိသေသလက္ခဏာများကြောင့်, ပုံသဏ္ဍာန် burr ကြိတ်ထုတ်လုပ်ရန်လွယ်ကူသည်. စာရွက်ဒီလိုမျိုး HASL / HASL LF ကုသမှုလုပ်ဖို့အကြံပြုသည်မဟုတ်, ဒါကြောင့်နှစ်မြှုပ်ခြင်းသံဖြူကုသမှုရန်အကြံပြုသည်. Cu ထူ: 1.5 အောင်, 2.0မီလီမီတာဘုတ်အဖွဲ့အထူ, နည်းပညာဆိုင်ရာ features တွေဖြစ်ပါတယ်2F4BM-2 နှင့်အတူအလွှာ. လျင်မြန်စွာအလှည့်ရှေ့ပြေးပုံစံ, တစ်ချိန်ကစမ်းသပ်ပြီး, မြင့်မားသော Volume ကိုထုတ်လုပ်မှုလက်ခံသည်. ဒါဟာစမ်းသပ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့အဖြစ်အသုံးပြုပါသည်. DHL နေဖြင့်ဖြန့်ဝေဖော်ပြ, ယူပီအက်စ်, Fedex, TNT သို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမဆိုသတ်မှတ်ထားတဲ့လမ်း, ပင်ပင်လယ်နားမှာက. ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ကျယ်ပြန့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များကအသိအမှတ်ပြုထားပါသည်, မည်သည့်လိုအပ်ချက်များကိုပါလျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ.
ဆားကစ်ဘုတ်စည်းဝေးပွဲကို Smt နည်းပညာ Smt စည်းဝေးပွဲကိုမျက်နှာပြင်-mount နှင့်အပေါက်စည်းဝေးပွဲကိုနှစ်ဆတဖက်သတ်ရောထွေး PCB စည်းဝေးပွဲကိုမှတဆင့်ပုံနှိပ် Smt အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အမြင့်မားယုံကြည်စိတ်ချရသော
high-တိကျစွာ Multilayer PCB 4Layers TG170 FR-4 .062" ပစ္စည်း 1 IPC အတန်းအစား၏ impedance ထိန်းချုပ်မှုအပြာရောင် soldermask နှင့်အတူအောင် Cu ENIG finish ကို PCB3စံ